Sida loo wareejiyo xogta laga helo hal iPhone oo loo wareejiyo mid kale | Wararka IPhone
Waqtiga sanadka wuxuu yimaadaa marka isticmaaleyaal badani ay dib u cusbooneysiiyaan iPhone-kooda, taasna macnaheedu waa inay mar kale dejiyaan. Dib ugu soo celi dhammaan codsiyada, ku rid faylkooda, ku xir koontadaada iCloud, arjiga emaylka, ikhtiyaarrada qaabeynta terminal ... Nidaam inta badan daal badan marka aad rabto inaad bilowdo adeegsiga iPhone-kaaga cusub sida ugu dhakhsaha badan. Hagaag, waad keydin kartaa waxaas oo dhan, waana wax aad ufudud.
Tan iyo markii la sii daayay macruufka 12.4, way ka sahlan tahay sidii hore si looga wareejiyo dhammaan xogta laga soo qaaday hal iPhone mid kale, adigoon ku xidhin iTunes, adigoon sugin dhamaan xogta laga soo dejinayo iCloud. Waad isku dhejin kartaa iPhone-kaaga hore midka cusub, waana geedi socod semi-otomatik ah oo aan hoos ku sharaxeyno.
Si loo sameeyo nidaamkan waxaan u baahanahay iPhone-kaaga duugga ah, midka aad rabto inaad isku dhejiso, iyo iPhone-ka cusub ee aad rabto inaad ku wareejiso dhammaan xogta. Qaybta dambe waa inay ahaataa mid aan la jaanqaadi karin shaashadda hore ee madhan ee "Hello" lagu akhrin karo dhawr luqadood.
Labada iPhones is ag dhig. Haddii ay leeyihiin batari yar, si fiican ugu xir iyaga hadda, in kastoo aysan muhiim ahayn haddana waa lagula talinayaa.
Bilow habka qaabeynta ee iPhone-ka cusub, xulo luqadda aad rabto inaad isticmaasho.
Daaqad ayaa ka soo muuqan doonta iPhone-kaaga hore oo tilmaamaysa suurtagalnimada adeegsiga si aad uhesho iPhone-ka cusub, dhagsii «Continue»
Waa inaad qaadataa iPhone-kii hore oo aad kamaradaada ku baarto daruuraha dhibcaha ka muuqda shaashadda iPhone-ka cusub, si la mid ah tii loo adeegsaday Apple Watch.
Nidaamka dejinta otomaatigga ah ayaa bilaabmi doona.
Hadda waa inaad fiirisaa iPhone-ka cusub, maxaa yeelay meelo kala duwan waa inaad gashaa xogta qaar, sida furaha furaha ee hore ee iPhone, ama lambarka sirta ah ee koontadaada. Waxay yihiin tallaabooyin nabadgelyo si looga hortago qof kasta oo si fudud u cloning aad iPhone. Marka tan la dhammeeyo, wareejinta xogta mid ka mid ah iPhone-ka ee kale ayaa bilaabmi doonta, hawshan oo muddadeedu ku xirnaan doonto xaddiga xogta la wareejinayo.. Xaaladdayda waxay ahayd qiyaastii 20-25 daqiiqo, intaas ka dib waxaan haystay laba iPhone oo isla nuxurka ah. Xitaa waxay ku wareejineysaa Apple Watch-kaaga iPhone-kaaga cusub.
Nidaamkan waxaa sidoo kale lagu fulin karaa fiilo, taas oo ku habboon haddii aad leedahay xiriir internet xawaare hoose ku socda, laakiin hadda ma jiro xarig danab ah oo hillaac ah, sidaa darteed waxaad u baahan doontaa adabtarada USB-hillaac iyo USB-ka hillaaca hillaaca ee ka socda iPhone-kaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Sida loo wareejiyo xogta ka mid iPhone in kale
Ku saabsan talaabooyinkan macluumaadka ah ee laga soo qaaday iPhone-kii hore illaa kan cusub, miyay tahay inaan haysto 2 SIM oo isku mid ah (midba mobiil kasta)?
Goorma ayaan kaarka SIM-ga u beddelaa taleefanka cusub
Jawaab Fernando P.
Halkee ayey tahay in kaarka SIM-ga loo beddelo taleefanka cusub?
Doorashadan kala iibsiga, maxaa ku dhacaya dhammaan whatsapp-ka mobilka hore? Ma gabi ahaanba waa la rogrogay mise sidoo kale waa inaad sameysid keyd kuu gaar ah oo ah WA?
Ku jawaab Iago
Nuqul sax ah ayaa la sameeyay
Gudbiyaan dhammaan noocyada emails, xitaa kuwa ganacsiga?
Sida loo cusbooneysiiyo barnaamijyada ku saabsan iPhone iyo iPad-ka oo leh iOS 13